Kungani Okungafanele Sikuphuthele European zemininingwane Izikhungo | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kungani Okungafanele Sikuphuthele European zemininingwane Izikhungo
(Kugcine ukubuyekezwa On: 18/06/2020)
Ngaso sonke isikhathi sizama ukwenza wokujikeleza yethu nakho kangcono futhi sisebenzise izindlela ezahlukene kanye namasu ukuze ulondoloze imali, isikhathi nomzamo. Ukujabulela iholide e kwezilwandle izindawo kusho ukuthi ufuna ukwenza isikhathi emangalisayo.
Abantu abenze evakashele eYurophu bejabulela izinto eziningana lapho futhi travel ngokusebenzisa trans-European Izikhungo sesitimela nakanjani omunye wabo.
IYurophu ezwekazini ezinye ezithandeka kakhulu izivakashi izindawo futhi uma uhlela ukujabulela umbono best of izwe elihle, zama trans-European izitimela, lapho ungakwazi ukujabulela amaningi izindawo kuhlanganise incwadi ithikithi lami isitimela inthanethi. Dlula blog, sifunde nokuthi kungani uwageje le amazing uhambo ngesitimela lapho eYurophu.
Cologne eVienna Izitimela
Lapho Journey Ebaluleke Kakhulu
Kwabanye abantu, uhambo kubaluleke ngaphezu ukufinyelela uya khona ikakhulu nxa ukuhamba izivakashi. Uma eYurophu, khona-ke akufanele yithuba ukuhlola izwekazi enhle kufike usuku lokuvalwa.
Izincwajana zemininingwane uhambo kukunika ithuba lokwenza uhambo lwakho Europe emangalisayo. Jabulela travel okunethezeka isitimela ukuze sifinyelele izindawo eziningana ngaphakathi Europe ne inzuzo incwadi inthanethi ithikithi lami isitimela inketho.
Jabulela Okuhamba phambili kwe-Europe
Europe iyikhaya lwamanye engcono isitimela opharetha emhlabeni futhi lapha ungakwazi ukujabulela eziphambili emhlabeni uhambo ngesitimela kungakhathaliseki uyini uya. ujantshi German, obb, TGVLyria, Thalys futhi Eurostar kukhona ezinye ehola isitimela opharetha eYurophu.
Ungakwazi ukujabulela service Isitimela kusukela emadolobheni amaningana aseYurophu ukuba sifinyelele izindawo olifisayo ngaphakathi Europe. You angahamba kusukela Amsterdam London, Berlin eHamburg, Naples ukuze Rome, eMilan Venice, London eParis, London Berlin, Vienna ukuze Munich kanye nezinye izindawo eziningi. Futhi okungcono ingxenye wukuthi ungakwazi ukujabulela ukukhetha incwadi ithikithi lami isitimela noma nini.
Thenga Ticket lakho ku-intanethi
Lokhu enye inzuzo ka zikhetha trans-European izitimela ukuze ujabulele ubuhle bezwe. it Akunandaba lapho ukhona, usengakwazi ukubhuka ithikithi lakho Isitimela inthanethi. Uma uhleleni ukuhamba Amsterdam kusukela Paris idatha ethile, ungakwazi uvikelekile esihlalweni sakho usebenzisa luhlobo pre-yokubhuka. Wena ungavakashela olusemthethweni isitimela iwebhusayithi a third-party ithikithi isitimela service yokubhuka umhlinzeki kanye ukubhuka ithikithi lakho usebenzisa debit noma credit card kusuka kuphi ngokusebenzisa incwadi ithikithi lami isitimela inthanethi.
Montpellier eParis Izitimela
Nice Paris Izitimela
Lezi ezinye zezizathu zokuthi kungani kufanele Ungalahlekelwa trans-European izitimela lapho eYurophu. Ukuze ufunde kabanzi mayelana nohlelo isitimela, isheduli isikhathi, futhi luhlobo ithikithi yokubhuka, ungavakashela – www.saveatrain.com
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Freasons-why-you-should-not-miss-trans-european-train-service%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / de ukuba / noma / ru futhi ngezilimi ezingaphezu.
#transeuropean CrossBorder i-eurotrip Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi